Igumbi lokulala elihle elikufutshane nendalo. - I-Airbnb
Igumbi lokulala elihle elikufutshane nendalo.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguAna Carolina
UAna Carolina ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle likwindlu enkulu kwiJardim Jequitibá eIndaiatuba-SP. Le ndlu ikwisitrato esikufuphi, ithule kakhulu ibe inendawo yokugcina indalo esisigxina. Ukuhlala apha uza kuva kuphela isandi sentwasahlobo ngasemva kunye neentaka ezininzi.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle livuleke kakhulu, linendawo yakho yokungena kunye negadi entle. Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linendawo yokubeka impahla, iTV negumbi lokuhlambela. Ndiyakuthanda ukudibana nabantu! Apha uza kwamkelwa kwaye wamkeleke kakhulu!
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle likwiimitha eziyi-900 ukusuka kwikholeji i-Max Planck isuka kwisibhedlele i-OcOC, ibe yindawo entle onokukhetha kuyo ukuya kwezi ndawo zimbini
Kufuphi neBosque do Saber (iindawo ezimbini ezikude), ipaki entle yokugcina indalo ivulelwe iindwendwe ngeempela-veki nangeeholide.
Umbuki zindwendwe ngu- Ana Carolina
Ifumaneka ngokupheleleyo xa kukho nakuphi na ukubonisana kunye nemibuzo ngokuhlala. Ndiyakuthanda ukudibana neendwendwe zam!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jardim Primavera